Baningi ingxoxo kanye nokugxeka uthukuthele maqondana umbhali ethi "Ikhala," Gogol. Amazwibela utshela izindaba fabulous, okuyinto ngaphansi kwezimo ezithile ezingachazwanga kungenzekani ngempela. Ngenxa ngesakhiwo engenangqondo, akubona bonke omagazini Wavuma ukunyathelisa lo msebenzi, umlobi kwadingeka isikhathi nakakhulu ukwenza izinguquko indaba yakhe. Bambalwa abantu ababephila Gogol zibonile ukuthi "impumulo" linencazelo double. Lapho echaza isimo kungazwakali uNikolai wafuna ukubonisa amaphutha umphakathi ngesikhathi sakhe.
Amazing sigameko senzeke ngo-March 25 kwakunjalo ngalesosikhathi ekuseni barber Ivan Yakovlevich ezitholakala isinkwa, wabhaka nomkakhe, ekhaleni ikhasimende lakhe sika Collegiate wesakhiwo Kovalev. Indoda enquma ukuqeda izinto ezinjalo, kodwa njalo lehla, ukubonisa ukuthi wayengumuntu emhlabeni. Ekugcineni, barber Ufaka ekhaleni lakhe ku iNeva. Khonamanjalo Kovalyov evuka futhi ehamba phezu kwesibuko ukubheka gxuma up on the induna ekhaleni, kodwa ingabe akukhona ukukhombisa, futhi ikhala lakhe.
Iqiniso ukuthi zekhotho Collegiate siyidinga impela ukubukeka ehloniphekile, iyalandisa (elikushoyo ngempela umsebenzi uqobo) isifinyezo. Ikhala ochitha wonke amathemba akhe, ngoba Kovalev efika e-dolobha ngenhloso yokuthola umsebenzi omuhle futhi ukushada. Ukulahlekelwa ingxenye enjalo ephawulekayo yomzimba kwenza zekhotho engenamandla futhi engenamsebenzi.
Isifinyezo indaba "The Ikhala," Gogol wathi ukuthi ngandlela-thile esehlanganise ubuso bakhe, Kovalev ethunyelwe iSikhulu Samaphoyisa, kodwa indlela ahlangana wakhe somzimba alahlekile. Ikhala, ukugqoka isigqoko nge fu elinobuthi, iyunifomu igolide-womfekethisi elisezingeni ikhansela isimo uhlezi ukuthutha waya iKazan Cathedral ukuthandaza. Okukhulu wathumela kuye kuqala Kovalev ngisho namahloni lapho bebona isiphathimandla yizicukuthwane ezinjalo. Ngesicelo ekhaleni emuva uzenza engawuqondi ukuthi bekukhulunywa ngani kanye zekhotho Collegiate e izinhloso zakhe awawenzi kahle.
ISikhulu Samaphoyisa Kovalev ikhaya singakutholi, ngakho hamba anikeze isaziso ephephandabeni mayelana nokulahlekelwa umzimba, kodwa kukhona ehluleka - yilokhu ngalama umkhiqizo nezifinyezo yayo. Ikhala akuyona nje kwalasha kusukela indoda ehloniphekile, ngakho umsizi wesikhonzi senkantolo yangasese kuphela ngokucasuka ulalela isikhalazo ezinkulu kungasizi.
Kovalev Ukushabisa iza ekhaya bese uqala ukucabanga mayelana isizathu ukungajabuli kwakhe. Bese kwenzeka kimi ukuthi, mhlawumbe, sisole Podtochina ekomkhulu phoyisa, ukuqasha lokho abanye abathakathi, ngoba zekhotho Collegiate kwaba ekujaheni ukushada nendodakazi yakhe. Lapho iphoyisa kuletha ekhaleni zihambisana ephepheni, Kovalev asitholanga endaweni zenjabulo - yilokho kusinika isifinyezo. Ikhala Okwamanje akazange ngisho bacabange ukunamathela endaweni.
Inhlokodolobha sandile ngandlebenye ukuthi ikhala Collegiate wesakhiwo ethile kanye saseNevsky Prospect, ehamba Tauride Garden, iya ku Juncker esitolo. Kodwa ngo-April 7, bonke bawela endaweni - Kovalev ephaphama futhi ukuthi kwebiwe endaweni yalo efanele.
Amazwibela "The Ikhala", nakuba emfushane, kodwa usalokhu indaba ngalokho ngosuku olulodwa, Major wakwazi ukuvakashela ezindaweni eziningi: esitolo candy emnyangweni, ngisho lucky ngokwanele ukuhlangabezana Podtochina nendodakazi yakhe. Incazelo e indaba Kovalev kumbhali ujabule onqamuka ukuvuma ukuthi indaba yasungulwa. Gogol ngisho kusimangaze ukuthi abanye abalobi bathathe lezi zindaba njengoba Ngesisekelo semisebenzi yakhe.
"Izinganekwane Legends of Ancient Greece": isifinyezo. "Izinganekwane Legends of Ancient Greece", Nikolay Kun